လင့်မြင်တိုင်း မနှိပ်ပါနဲ့ - အမေ့သားလေး.... @ mixxt
အခုနောက်ပိုင်း URL shortener နဲ့attack လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးကတော်တော်များပါတယ်။ ပထမဆုံးစလာတဲ့ပုံစံမျိုးကတော့ chatbox မှာ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းကပြောတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ လာတာပါ။ အောက်ကပုံစံမျိုးတွေပါ။
OH WOW (yourfacebookusername) Their isaFacebook bug right now and There sending out free WALMART GIFTS @ http://apps.facebook.com/fbgiftshops/?rynyrgnr Received mine yesterday hurry before its to late!
hey, i just madeaphotoshop of you, check it out :P: bit.ly/hWGMek
hi, lol check out this girl,what she did.. i cant believe this video :): goo.gl/BnFMN
Yo, I am gunna look likeasharpie in 15 years! See what you will look like: bit.ly/gVKD13
Hey, check out this girl, lol, she must be out of her mind for making that video!: bit.ly/erH085
နောက်ပုံစံတစ်မျိုးကတော့ အားလုံးစိတ်ဝင်စားလောက်တဲ့ Video clip တွေကို facebook ပေါ်မှာ share တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နှိပ်မိအောင် ဆွဲဆောင်နေတာပါ။ အသေးစိတ်ကို
<a href="https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150120443537523" target="_blank" rel="nofollow">https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150120443537523</a>;
ရေးထားတာရှိပါတယ်။ နောက်တစ်မျိုးကတော့ wall ပေါ်မှာ share တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ လာတာပါ။ ကျွန်တော်ဆီမှာတော့ ဒီနေ့ မှသတိထားမိပါတယ်။ လာတဲ့ပုံစံက အောက်ပါအတိုင်းပါ။
yourname Guess what? You know who just gotanew Apple iPad2 to test out and keep without payingacent. I don't think this will last long, they are only sending outalimited supply of promo ipad2's in each area so you should hurry. It did not come with any leather case or fancy accessories but who cares, it was free! This is where I got it from.
ဆိုပြီး url shortener နဲ့shorten လုပ်ထားတဲ့ short url ပဲတွေ့ ရမှာပါ။
ကျွန်တော်ပြောတာနှိပ်မိရင် ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာဆိုတဲ့အပိုင်းကိုမရောက်သေးဘူး။ နှိပ်မိရင် ကိုယ်က victim ဖြစ်ပြီး အခြားသူတွေကို အထက်ပါ message တွေကို သွားပို့ မိနေမှာပါ။ video clip ဆိုလည်းထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။ ကိုယ်က အဲဒီ video clip ကို like လုပ်လိုက်ပါတယ်လို့ ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။ တခြားသူက ဟိုကောင်တောင် ကြိုက်သေးတာပဲဆိုပြီး နှိပ်ကြည့် အဲဒီလိုနဲ့ သံသရာလည်နေမှာပါပဲ။ ကိုယ် wall မှာလာတင်တယ်ဆိုလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။. ကိုယ် wall မှာတောင်တကူးတက လာတင်သေးတာပဲ ဆိုပြီးတော့ နှိပ်ကြည့်မိမှာပါပဲ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တော့ သတိထားမိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ပျံနှံပုံကတော့ zombie တွေလို တစ်ယောက် ကိုက်လိုက်တာနဲ့ အကိုက်ခံရတဲ့တစ်ယောက် zombie ဖြစ်သွားပြီး ပျံနှံသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ ဒါအပြင်မိမိတို့ ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခိုးယူတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုဆိုတော့ ကျွန်တော် တို့url shortener တွေမသုံးပဲနေလို့ ရမလား ???
ကျွန်တော်တို့url shortener တွေသုံးရတယ်ဆိုတာ တခါတရံမှာ လင့်အမှန်ကို publicly မသိစေချင်တာပဲဖြစ်စေ twitter လို microblogging platform တွေမှာရော facebook လို social networking platform တွေမှာပါ စာလုံးအရေအတွက်က limit ဖြစ်တဲ့အတွက် စာလုံး အရေအတွက် save ဖြစ်အောင်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ ဘယ်လိုဖြေရှင်းသင့်သလဲ။ ????
(https://www.facebook.com/SkipSoft ) ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင် ဟိုးအပေါ်ဘက်မှာရေးထားတဲ့ ပထမဆုံးလင့်ကလည်း အသုံးဝင်ပါတယ်။ နောက်ဒါအပြင် ဒီလိုမဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့ တက်နိုင်သလောက် facebook.com ကိုအသိပေးတဲ့အနေနဲ့report လုပ်လို့ ရပါတယ်။ ကိုယ်ပေါ်လာတင်တဲ့ဟာတွေက malicous ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် post ရဲ့အပေါ် ညာဘက်ဒေါင့်လေးက အမှား button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ report abuse ကိုနှိပ်ပြီး spam or scam ဆိုတာကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် နောက်အခြားလူတွေမကလစ်အောင် အဲဒီ post ကိုဖျက်လိုက်ပါ။ နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ မှတ်ယူထားရမှာကတော့ အထက်ပါ ပုံစံအတိုင်း တသမတ်တည်းလာမယ်လို့လှေနံဓါးထစ်မှတ်ယူလို့ တော့မရပါဘူး။ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ မကလစ် လစ်ချင်အောင် ဆွဲဆောင်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်လို့ မှတ်ယူရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။
KO MORRIS ရဲ့.... ပိုစ်လေးကို CREDIT ပေးပါသည်။